Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. गौरिकाको अर्को कीर्तिमान, एउटै सागमा चार स्वर्ण – Emountain TV
काठमाडौं, २३ मंसिर । १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको पौडीमा गौरिका सिंहले सोमबार चौथो स्वर्ण पदक जितेकी छिन् ।
यसअघि तीन स्वर्ण पदक हात पारेकी गौरिकाले सोमबार १ सय मिटर फ्रिस्टाइलमा स्वर्ण पदक जितेकी हुन् । सागको ३५ वर्षे इतिहासमा एउटै संस्करणमा चार स्वर्णपदक जित्ने गौरिका पहिलो नेपाली खेलाडी भएकी छन् ।
उनले निर्धारित दूरी ५८ दशमलव १३ सेकेन्डमा पार गरेर स्वर्ण जितेकी हुन् । १३औँ सागमा गौरिकाले ४ स्वर्ण सहित २ वटा रजत र २ वटा कांस्य समेत जितेकी छन्।
सोमबार नै साग अन्तर्गत बक्सिङमा महिलातर्फ नेपालकी मिनु गुरुङले ऐतिहासिक स्वर्ण जितेकी छिन् । ५४ केजी तौल समुहमा निमु गुरुङले भारतीय खेलाडीलाई हराउँदै स्वर्ण जितेकी हुन् ।
यसैगरी पुरुष ६४ केजी तौल समूहमा भूपेन्द्र थापाले स्वर्ण जितेका छन् । थापाले फाइनलमा भारतीय खेलाडी अंकको आधारमा पराजित गरेर स्वर्ण पदक जितेका हुन्।
यसैगरी जुडोमा महिलातर्फ नेपालले स्वर्ण जितेको छ । महिला ७८ केजीमुनीको तौल समुहमा नेपालकी पुनम श्रेष्ठले स्वर्ण जितेकी छिन् । पुनमले बंगलादेशकी खेलाडीलाई हराउँदै स्वर्ण हात पारेकी हुन् ।
योसँगै नेपालको स्वर्ण पदक संख्या ४९ पुगेको छ । यसैगरी सागको थ्री अन थ्री बास्केटबलमा पुरुषतर्फ नेपालले रजत पदक प्राप्त गरेको छ । त्रिपुरेश्वरस्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को कभर्डहलमा सोमबार भएको फाइनलमा नेपाल भारतसँग २०–१५ ले पराजित भएको हो ।
बास्केटबलमा नेपालले थ्री अन थ्रीमा पदक जितेको पहिलो पटक हो । थ्री अन थ्री बास्केटबलको महिलातर्फ भने नेपालले कास्य पदक जितेको छ । जारी साग खेलकुदको पछिल्लो पदक तालिका अनुसार भारतले १ सय ३८ स्वर्ण, ८३ रजत र ४३ कास्य सहित कुल २ सय ६४ पदक जितेर अग्र स्थानमा रहेको छ ।
नेपाल ४९ स्वर्ण, ४८ रजत र ७८ कास्य सहित १ सय ७५ पदक जितेर दोस्रो स्थानमा छ । श्रीलंकाले ३६ स्वर्ण, ७४ रजत र १ सय ६ कास्य पदक हात पारेको छ । पाकिस्तानले ३०, बंगलादेशले १८ र माल्दिभ्सले १ स्वर्ण पदक जितेका छन् । भुटानले ५ वटा रजत र १३ वटा कास्य पदक जितेको छ ।